Madaxweynaha Jubbaland oo maanta ku wajahan magaalada Cadaado – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta ku wajahan magaalada Cadaado oo xarun KMG u ah Maamulka Galmudug, iyadoo qaban qaabo lagu soo dhoweynayo ay ka socoto.
Booqashada Axmed Madoobe oo ah mid gaaban ayaa la sheegay inay tahay balan qaad uu horay Maamulka Galmudug uga balan qaaday inuu soo booqan doono.
Axmed Madoobe ayaa la filayaa inuu kula kulmo Cadaado Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, iyagoo ka wada hadli doona arrimo dhowr ah.
Mas’uul ka tirsan Maamulka Galmudug ayaa xaqiijiyay inay u diyaar garoobeen soo dhoweynta Madaxweynaha Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa bilo ka hor ka mid ahaa mas’uuliyiintii waan waanta u tagay Gaalkacyo ee ku guuleystay inay heshiis kala dhex dhigaan Puntland iyo Galmudug.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa kaga gudbi doona Cadaado dhinaca Puntland, halkaasoo uu kaga qeyb geli doono furitaanka garoonka diyaaradaha Boosaaso oo si casri ah loo dhisay iyo sanad-guurada labaad ee ka soo wareegatay doorashadii Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas.
Prof. Maxamed Cumar Dalxa ayaa wuxuu sheegay in lagu deg degay taageerada, ay Dowladda Somaliya u muujisay Boqortooyada Sacuudi Carabiya.